I-China L-Theanine Ukukhiqiza neFektri | Ukuxubeka
Igama lesiNgisi: L-Theanine
Ifomula Yamamolekhula: C7H14N2O3
Isisindo Yamamolekhula: 174.2
I-L-theanine iyi-amino acid etholakala kakhulu emaqabungeni wetiye nangamanani amancane kumakhowe eBay Bolete.Ingatholakala kuwo womabili itiye eliluhlaza nokumnyama.
Iphinde itholakale ngefomu lephilisi noma ithebhulethi ezitolo eziningi zemithi.Ucwaningo lukhombisa ukuthi iL-theanine ikhuthaza ukuphumula ngaphandle kokwezela. Abantu abaningi bathatha i-L-theanine ukusiza ukunciphisa ukucindezeleka nokuphumula.
Abaphenyi bathole ukuthi i-L-theanine inciphise ukukhathazeka nezimpawu ezithuthukisiwe.
I-L-theanine ingasiza ukukhulisa ukugxila nokunaka.Ucwaningo lwango-2013 luthole ukuthi amazinga alinganiselayo we-L-theanine ne-caffeine (cishe u-97 mg no-40 mg) asize iqembu labantu abasha ukuba ligxile kangcono ngesikhathi semisebenzi enzima.
Abahlanganyeli besifundo nabo bazizwa bephapheme futhi bengakhathali ngokujwayelekile. Ngokusho kolunye ucwaningo, le miphumela ingazwakala kungakapheli nemizuzu engama-30.
Olunye ucwaningo luphakamisa ukuthi i-L-theanine ingathuthukisa ukusebenza kwesistimu yomzimba yokuzivikela. Ucwaningo olulodwa olushicilelwe kumagazini i-Beverages luthole ukuthi i-L-theanine ingasiza ekwehliseni izehlakalo zezifo zomgudu wokuphefumula ezingaphezulu.
Olunye ucwaningo luthole ukuthi uL-theanine angasiza ekuthuthukiseni ukuvuvukala emgodini wamathumbu. Kodwa-ke, kudingeka olunye ucwaningo ukuqinisekisa nokwandisa kulokhu okutholakele.
I-L-theanine ingahle izuzise labo abahlangabezana nengcindezi yegazi ezimeni ezicindezelayo.Ucwaningo luka-2012 lubone abantu abajwayele ukuzwa umfutho wegazi ophakeme ngemuva kwemisebenzi ethile yengqondo.Bathola ukuthi uL-theanine usize ukulawula lokhu kukhuphuka kwengcindezi yegazi kulawo maqembu. Esicwaningweni esifanayo, abacwaningi baqaphele ukuthi i-caffeine inomphumela ofanayo kodwa ongazuzi kangako.
I-L-theanine ingasiza futhi abafana abatholakale benenkinga yokungakwazi ukunakekelwa ngokweqile (ADHD) ukulala kangcono.Ucwaningo lwango-2011 lubheke imiphumela ye-L-theanine kubafana abangama-98 abaneminyaka engu-8 kuya kwengu-12. -theanine kabili nsuku zonke. Elinye iqembu lithole amaphilisi e-placebo.
Ngemuva kwamasonto ayisithupha, iqembu elithatha i-L-theanine kwatholakala ukuthi lalibe nokulala okude ngokwengeziwe. Yize imiphumela ithembisa, kudingeka olunye ucwaningo ngaphambi kokuthi kuqinisekiswe ukuthi luphephile futhi lusebenza kahle, ikakhulukazi ezinganeni.
Izinyathelo zokuqapha: gcina endaweni yokugcina impahla epholile, eyomile nenomoya.
Langaphambilini IHordenine hydrochloride
I-Sodium Beta Hydroxybutyrate (BHB Na)